Vaovao - Miverena amin'ny fampandrenesana ny loko tena-fanatanjahan-tena
Ny fitaoman'ny tontolo ara-tsosialy isan-karazany sy ny fakam-panahy amin'ny karazan-javatra rehetra dia mandany ny votoatin'ny fiainana ary koa mahavariana ny toetra tsotra tany am-boalohany. Ny "fiverenana amin'ny fahamarinana" dia midika hoe famerenana ny toetra amam-panahy sy ny fiainana amin'ny tsy fananan-tsiny. Rehefa miverina amin'ny dingana voalohany ny ekolojia eto an-tany, ny fahasalaman'ny olombelona ary ny xinxing rehetra, ary mahatsapa tsara ireo zavatra mahafinaritra manodidina anao, esory ny fahasarotana be loatra ary miverena amin'ny fotony, hahazo fiainana be ny fiainana. Ny loko manan-danja amin'ny fanatanjahan-tena amin'ny fararano sy ririnina 22/23 dia nalaina avy tamin'ny zavatra tsara eo amin'ny fiainana sy ny natiora. Ny psikolojia miloko dia mitaona ny mpanjifa izay mitady optimisme sy mandanjalanja ny fahasalamana sy ny tontolo iainana, mitondra angovo miabo ary fahatsapana filaminana. Noho izany, ny loko voajanahary tena mahavoky izay mampiseho angovo miabo no tena mampiavaka azy, ny loko tsy miandany izay mampitombo ny fitoniana sy ny fanasitranana dia mitondra fahatsapana filaminana, raha ny loko marevaka ambany kosa dia misy vokany ara-tsaina madio sy azo antoka ary mamelombelona. Raha ampitahaina amin'ny vanim-potoana teo aloha, ny kodiarana miloko ankapobeny dia misy faharetana ary ny fanehoana ny fanantenana dia matanjaka kokoa raha ny volony kosa tsy very.
Ny loko fotsy tsy misy ifandraisany dia avy amin'ny fiainana, ary ny loko tsy miandany miverina amin'ny natiora dia tsy voafatotra ary tena izy, mitondra fahatsapana fitoniana sy fanasitranana. Ny firafitra marefo amin'ny rindrina dia mitondra aingam-panahy ho an'ny fonosana vita amina milamina. Ny loko dia mandroso, tsotra, azo ampiharina, mateza ary azo ampiasaina amin'ny vanim-potoana rehetra.
Tsy voafatotra amin'ny akanjo fanatanjahan-tena amin'ny fararano sy ririnina 22/23 mba hanehoana ny vokatry ny fanasitranana azo antoka, famonosana malefaka, lamba vita amin'ny kofehy tsy misy fonosana ary lamba volon'ondry mahaliana mifangaro miaraka amin'ny endrika, mety amin'ny fanatanjahan-tena sy ny fanatanjahan-tena amin'ny toetrandro rehetra; miaraka amin'izay koa, ny fotsy tsy voafatotra dia azo ampifandraisina amin'ny lamaody Ny kinova fandraharahana dia mety ho fitaovana tsara ho an'ny birao mahazo aina.
Ny Glow Blue dia mampiseho ny fahatsapana ny hatsiaka sy ny haitao, mitondra fahasalamana, fiarovana ary vokatra ara-tsaina momba ny fahadiovana ary mampitony ny fihetsem-po. Ny glow blue no tonon-kirakira misy loko miloko vanim-potoana vaovao, izay manatsara ny famirapiratan'ny fahatsapana ny loko ary mahatonga ny fifandimbiasana eo amin'ny loko hifandrindra kokoa. Ny Glow Blue amin'ny vanim-potoana vaovao dia manampy endrika mahafinaritra sy malalaka kokoa, ny fampiasana ny loko lehibe ary ny dikanteny mahay mandika azy.
Ny loko manga dia loko mirindra. Ny fomba fampiasana azy no lakileny. Ny glow blue no loko lehibe indrindra, mahafoy ny endriny feno pitsopitsony be loatra, ary mampiasa kinova fohy mba hanaovana endrika loko amin'ny vatana iray manontolo, mamorona manga mamiratra sy mangatsiaka. Ny fahatsapana ny loko. Ity loko ity dia mety amin'ny fialam-boly an-tanàn-dehibe, ny fanatanjahan-tena anaty ary ny fampiasana ivelany amin'ny lamaody amin'ny fomba sy fomba isan-karazany, ary matanjaka ny loko.
Eo ambanin'ny lohahevitry ny "miverina amin'ny tena izy" amin'ny fararano sy ririnina amin'ny 22/23, ny loko tsy miandany miaraka amin'ny saturation ambany sy ny famirapiratan'ny antonony dia atolotra ho loko azo ampiharina sy maharitra, izay azo ampiasaina amin'ny seho sy fizaran-taona maro; ny aingam-panahy dia avy amin'ny soot amin'ny tena fiainana, ary miaraka amin'izay dia mampifangaro ny endrika mafana ny soot. Ny loko tsy miandany miaraka amin'ny fahatsapana filaminana dia miseho amin'ny vatana iray manontolo, manampy doka mena maivana amin'ny tsy fahampian'ny loko, izay mahatonga ny olona hahatsiaro ho tony sy sitrana.
Ny volondavenona feno setroka eo anelanelan'ny hazavana sy ambany dia misy toerana tsy azo soloina eo ambanin'ny lohahevitra hoe "miverina amin'ny tena izy" amin'ny fararano sy ririnina 22/23. Na ampiasaina amin'ny akanjo mahazatra na akanjo ba mampihetsi-po ary maivana maivana, atambatra amin'ny lamba milay amin'ny hoditra, dia mampiseho ny setroka manokana Mampiavaka ny lokon'ny rivotra tsy miandany. Ny lamaody marobe dia afaka mifehy ny fitafiana mahazatra isan'andro.
Ny farihy maitso lalina dia nalaina avy amin'ny natiora, mampiseho fahatsapana fiarovana voajanahary amin'ny fararano sy ririnina 22/23. Izy io dia avy amin'ny tendrombohitra mineraly sy farihy abyssal amin'ny halalin'ny natiora. Mandosira ny tanàna hiaina ny hakanton'ny natiora, hitondra fahatsapana fahabangana ary mandositra izao tontolo izao; maitso ny vanim-potoana vaovao. Maneho ny lokon'ny loko mahavoky be izy, mampiseho ny hery voajanahary amin'ny tany, ary manampy lamaody amin'ny akanjo fanatanjahan-tena, lasa loko lamaody sy lamaody amin'ny vanim-potoana tetezamita amin'ny fararano sy ririnina.
Ny farihy maitso lalina sy milamina dia mety ho loko lehibe, mety amin'ny fanatanjahantena an-tanàn-dehibe sy fialam-boly, fanatanjahan-tena any ivelany, fanatanjahan-tena anaty ary fomba fanatanjahan-tena hafa. Ny volavolan-doha fiarovan-doha avo lenta dia manolotra vokatra fiarovana, ampiarahina amin'ny paosin-drivotra miasa sy famolavolana antsipirihany hafa mba hampisehoana lamaody Ao an-tokotany vaovao, ny fironana vita amin'ny lamaody mifanohitra ampiarahina amin'ny silhouette mpamaky rivotra dia manome ny lamaody an-dalambe vaovao; manomboka amin'ny arabe ka hatrany ivelany ary amin'ny sehatra maro hafa, mety tsara ilay loko maitso lalina ao anaty.
Ny loko solifara mineraly dia nalaina avy tamin'ny solifara voajanahary voajanahary. Ny fahatsapana loko avo lenta dia misy fehiloha amin'ny fararano sy ny ririnina. Ny famirapiratan'ny vanja milevina sy ny kapoaka dia mameno ny lokon'ny solifara mafana. Raha mampiseho fifaliana sy fientanam-po dia manampy rivo-piainana lamaody amin'ny akanjo fanatanjahan-tena izany, lasa loko lamaody sy lamaody amin'ny fararano sy ririnina.
Ny lokon'ny solifara mineraly mafana sy lamaody dia mety ho loko lehibe, ampiasaina amin'ny fialam-boly fanatanjahan-tena an-tanàn-dehibe sy ny fomba fanatanjahan-tena any ivelany, na toy ny haingo miloko faharoa miaraka amin'ny fomba fanatanjahan-tena anaty trano lamaody, dia lamaody ihany koa izy io; fitambaran-damba somary matevina sy midadasika kokoa Ny aloky ny tanàna kely vonona hiakanjo tanàna dia mitondra fihetsiketsehana an-tanàn-dehibe. Ny lamba maivana sy malefaka azo alain-tahaka dia azo ampiasaina ho toy ny sosona amboniny, atambatra amin'ny kinova fanatanjahan-tena malalaka, hanomezana fampiononana sy fampisehoana ho an'ny fanatanjahan-tena amin'ny toetrandro sy fialamboly. Ny volavolan-drivotra mifangaro rivotra sy ny antsipirian'ny tadiny avo lenta dia atambatra amin'ny lamba tsy tantera-drano any ivelany mba hanehoana fomba ivelany amin'ny lamaody. Avy amin'ny tanàna ka hatrany an-tendrombohitra sy amin'ny sehatra hafa dia mety ny lokon'ny solifara mineraly.
Amin'ny foto-kevitry ny "Miverina amin'ny tena izy", ny fahadiovan'ny volomboasary mamiratra dia ahena kely, miaraka amina endrika maizina sy ny endrika milamina, ny lokony dia manome fiatraikany kely, manampy trotraka ny rivotra mafana amin'ny fararano sy ririnina, ary mitondra fanantenana ho an'ity lohahevitra ity. Ny fampiasana ny fanatanjahan-tena dia aseho indrindra amin'ny loko lehibe, voaravaka manga mifanohitra mba hanatsara ny fahatsapana ny Retro.
Ny tena fahombiazan'ny volomboasary mavitrika amin'ny vanim-potoana vaovao dia ampiasaina ho loko lehibe amin'ny faritra midadasika, ary ny firavaky ny loko mifanohitra amin'ny ampahany dia manintona ny fahatsapana ny lokon'ny lokony; atambatra amin'ny lamba tsy tantera-drano sy tantera-drivotra miaraka amina endriny malalaka, manome fampisehoana ho an'ny any ivelany lamaody izy io ary azo ampiasaina ho loko mifanentana. Retro Vibrant Orange dia mety ampiasaina amin'ny fialamboly an-tanàn-dehibe, lamaody ivelany ary fanatanjahan-tena sy fialamboly.
Ny lohahevitry ny "Return to True" dia mifantoka amin'ny tsy fananan-tsiny sy ny natiora. Ny manga malaso lapis lazuli ao anaty rafitra maizina dia nalaina avy tamin'ny lapis lazuli voajanahary, ary nampiana sosona sivana volondavenona, izay malefaka sy tsotra, manome fahatsapana fitoniana sy fampidirana olona ny olona. Taorian'ny vanim-potoanan'ny tsy fitoniana dia miseho amin'ny faritra midadasika ny lapis lazuli blue, ary ny endrika lamba dia azo ezahina ampidirina singa manjelanjelatra miafina, mifono mistery, voafehy ary lamaody.
Amin'ity vanim-potoana ity, ny lapis lazuli manga dia milamina kokoa ary voafehy, ary izy io koa dia iray amin'ireo loko fironana lehibe amin'ny fararano sy ririnina 22/23. Ny lamba volon'ondry marevaka marevaka na lamba acetate miaraka amina famirapiratany somary mamirapiratra dia manatsara ny hery malaky ny lapis lazuli manga, miaraka amina akanjo ba vita amin'ny lamaody misy akanjo lava, pataloha mahazatra ary zavatra hafa hanehoana ny fahatsaran'ny lamaody fanatanjahantena an-drenivohitra. Ny manga lapis lazuli manga dia be mpiorina ary azo ampiasaina amin'ny palitao baseball matevina na palitao mahazatra, ary azo ampiasaina amin'ny akanjo marobe mba hanatsarana ny fahaiza-miasa.
Eo ambanin'ny lohahevitra "Miverina amin'ny tena izy", ny volomparasy mavo maizina dia nalaina ho iray amin'ireo loko fironana amin'ny paleta. Avy amin'ny fitomboana voajanahary amin'ny aviavy izy io. Loko tena izy, fa miaraka amin'izay dia mampiseho firafitra sentetika izy, noho izany dia samy manana ny Internet na ny tsipika. Amin'ny maha-manintona azy, ity karazana tantara sy loko lamaody ity dia mendrika ny hiezaka ny hampivelatra.
Ny volomparasy aviavy lalina sy lamaody dia mety ho loko lehibe amin'ny akanjo fialamboly ara-panatanjahantena an-tanàn-dehibe sy ny fanatanjahan-tena anaty ary ny fomba fanatanjahan-tena hafa. Ny lamba vita amin'ny hoditra mamirapiratra dia ampiasaina amin'ny famolavolana fomba hampitomboana ny firafitra lamaody. Mandritra izany fotoana izany, dia azo ampiasaina amin'ny lamina ho an'ny fampiasana vatana feno, marani-tsaina ary maody; Ny lalao rehetra dia mety amin'ny karazana entana isan-karazany eo ambanin'ny fanatanjahantena an-drenivohitra.